προχωρηση - Griechisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: προχωρηση (Griechisch - Burmesisch)
ဟေရှာယက၊ ထာဝရဘုရား အမိန့်တော်ရှိသည် အတိုင်း ပြုတော်မူမည်ဟု ထာဝရဘုရားသည် သင့်အား ပေးတော်မူသော လက္ခဏာသက်သေဟူမူကား၊ အရိပ် သည် ဆယ်ချက်တိုးရမည်လော။ ဆယ်ချက်ဆုတ်ရမည် လောဟု မေးသော်၊
Οστις καθηται εν τη πολει ταυτη, θελει αποθανει υπο μαχαιρας και υπο πεινης και υπο λοιμου αλλ' οστις εξελθη και προχωρηση προς τους Χαλδαιους οιτινες σας πολιορκουσι, θελει ζησει και η ζωη αυτου θελει εισθαι ως λαφυρον εις αυτον.
ဤမြို့ထဲမှာနေသော သူသည် ထားဘေး၊ မွတ်သိပ်ခြင်းဘေး၊ နာခြင်းဘေးဖြင့် သေလိမ့်မည်။ မြို့ပြင်သို့ထွက်၍၊ မြို့ပြင်မှာ တပ်စွဲလျက်နေသော ခါလဒဲလူတို့ဘက်သို့ ဝင်စားသော သူသည် အသက် ချမ်းသာ၍ လုယူရသော ဥစ္စာကဲ့သို့ ကိုယ်အသက်ကို ရလိမ့်မည်။
Και προχωρησας εκειθεν ειδεν αλλους δυο αδελφους, Ιακωβον τον του Ζεβεδαιου και Ιωαννην τον αδελφον αυτου, εν τω πλοιω μετα Ζεβεδαιου του πατρος αυτων επισκευαζοντας τα δικτυα αυτων, και εκαλεσεν αυτους.
ထိုမှလွန်လျှင် အခြားသောညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်၊ ဇေဗေဒဲ၏သား ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့သည် သူတို့အဘနှင့်အတူ လှေပေါ်မှာ ပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကို မြင်၍ ခေါ်တော်မူ၏။
ထိုမှအနည်းငယ်လွန်ပြန်လျှင် ဇေဗေဒဲ၏သား ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်တို့သည် လှေပေါ်မှာ ပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ ချက်ခြင်းခေါ်တော်မူ၏။
Και προχωρησας ολιγον επεσεν επι προσωπον αυτου, προσευχομενος και λεγων Πατερ μου, εαν ηναι δυνατον, ας παρελθη απ' εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχι ως εγω θελω, αλλ' ως συ.
ထိုမှ အနည်းငယ်လွန်ပြန်လျှင် ပြပ်ဝပ်၍အကျွန်ုပ်အဘ၊ ဤခွက်သည် အကျွန်ုပ်ကိုလွန်သွားနိုင်လျှင် လွန်သွားပါစေသော။ သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်အတိုင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော်အလိုရှိသည် အတိုင်း ဖြစ်ပါစေသောဟု ဆုတောင်းတော်မူ၏။
Και προχωρησας ολιγον, επεσεν επι της γης και προσηυχετο να παρελθη αν ηναι δυνατον απ' αυτου η ωρα εκεινη,
pen y cog (Walisisch>Englisch)sharing idea (Englisch>Latein)défaillance de redresseur (Französisch>Englisch)užpildė (Litauisch>Tagalog)gweithiodd (Walisisch>Englisch)quadrupling (Englisch>Hindi)torino (Italienisch>Englisch)horse chestnut (Englisch>Tagalog)i want to kiss your neck (Englisch>Sinhala)important (Italienisch>Latein)diilhamkan (Malaysisch>Chinesisch (Vereinfacht))o senhoremeu pastor nada me faltara em latim (Portugiesisch>Latein)tum sab jaan jaoge (Hindi>Englisch)繰り返す行 (Japanisch>Englisch)co term (Englisch>Französisch)dealkylation (Englisch>Italienisch)zmydlenia (Polnisch>Französisch)hurtigvoksende (Dänisch>Italienisch)bemevc? (Portugiesisch>Englisch)tokio (Englisch>Deutsch)mashtron (Albanisch>Tagalog)se latrevo toso poli poli (Griechisch>Englisch)沙巴 (Chinesisch (Vereinfacht)>Malaysisch)fenilalanin (Ungarisch>Italienisch)patli ho gayi (Hindi>Englisch)